Ogaden News Agency (ONA) – Shirkii Jaaliyada Soomaalida Ogaadeeniy ee Gaarisa oo guul ku dhamaaday.
Shirkii Jaaliyada Soomaalida Ogaadeeniy ee Gaarisa oo guul ku dhamaaday.
Posted by ONA Admin	/ January 7, 2012
Magaalad Gaarisa ee Caasimada Gobolka W/bari Kenya waxaa maalmahan ka socoday shirar iyo abaabulo ay wadeen mas’uuliyiinta jaaliyada Ogaadeeniye ee Gaarisa, halkaasoo shalay la’isugu yimid kulan gabogabo u aha shirarkii halkaas ka socoday. Kulanka oo si heer sare ah loo soo agaasimay ayaa waxaa ka soo qayb galay dhamaan xubnaha jaaliyada, sida Dhalinyarada, Odayaash iyo haweenka.
Waxaa shirka gudoominayey gudoomiyaha Jaaliyada Mudane Cabdirishiid oo oogu hanbalayey guud ahaan xubnah jaaliyada hawlihii sanadkii la soo dhaafay u qabsoomay iyo guulaha ay ka gaadheen isaga sheegay in shaqo badan ay hortaalo jaaliyada sanadka cusub.
Ujeedad shirkan iyo shirarkii ka horeyeyna ay tahay in diyaar garow ay muujiyaan xubnu si buu yidhi loo dhamaystiro hawlaha nooyaala wuxuuna gudoomiyuhu qudbada kooban u jeediyey xubinihii jaaliyada waxaan hadaladiisii ka mid ahaa; “Waxaa jirey in sanadkii la soo dhaafay jaaliyadu ay qabtay hawlo badan, kuwaas wax yaabah la taaban karo ay kamid yihiin abaabulka iyo isku-xidhka iyo iska warqabka xubnaha jaaliyadda iyo waliba kobcinta garaadka dhalinyarad oo aan u diyaariney in hawlaha jaaliyada iyo halgankaba ay waxtaraan. Wuxuun intaa ku daray gudoonku in jaaliyadu ay meel fiican ka gaadhay difaac iyo wax tarka muwaadiniinta Ogaadeeniya ee ku nool gobolka W/bari Kenya.
Warbixintii gudoomiyaha kadib ayey su’aalo waydiiyeen Xubnuhu isagoo si fiican ooga jawaabay guud ahaan su’aalihii la waydiiyey Gudoomiye Cabdirishiid.
Waxaa iyagana warbixin iyo talooyinba siiyey xubnaha jaaliyada Hogaamada warfaafinta Jaaliyada iyo Hogaanka arrimaha diinta ee Jaaliyada. Intii ay socodeen Warbixinadii Hogaamada jaaliyada waxaa khadka telefoonk kaga qayeb galay oo khudbad ka jeediyey shirka Ku/xigeena H. Arrimaha bulashada Mudane Cabdiqaadir Gamdiid oo warbixin dheer ka bixiyey guud ahaan hawlaha jaaliyadaha Ogaadeniya ee caalamka, kuna soo gabogabeeyey hadalkiisa mahadcelin uu u jeediyey Jaaliyada Gaarisa.
Intaas kadib waxaa shirka ka hadlay Mudane Cumar Soya oo ah Xoghayaha Warfaafinta iyo Abaabulka ururka dhalinyarada iyo ardayda OYSU, isagoo sharaxaad ka bixiyey OYSU sida ay u shaqayso iyo waxqabadka ururka wuxuu intaas ku darey Cumar in uu maalintii shalay ahayd uu soo dhamaaday shirweynihii Ururka oo heer caalami ah, ayna ka soo bixi doonaan go’aamo wax ku ool oo shirkaasi lagu gaadhay uuna diyaaryahay qorshihii OYSU ee sanadkan 2012 ka ay ku shaqayn lahaayeen dhalinta Ogaadeeniya ee heer aduun. Wuxuu Cumar Soya aad oogu baraarujiyey dhalinta in ay buuxiyaan Shurudaha xubin noqoshada OYSU isna diiwaan galiyaan.
Ugu danbayntii xubnaha jaaliyada ee goobta joogay ayaa soo gudbiyey afkaartood ku wajahan hawlaha jaaliyada iyo waliba talo bixino ay siiyeen hogaamada sare ee jaaliyada.
Waxaan kulanka lagu soo gabogabeeyey dhaantadii dhaqanka inoo ahayd iyo suugaan Halgameed ay dhalintu ku muujinayeen sida ay oogu faraxsanyiiin shaqooyin ay jaaliyadu halkaas ka wado.
halganku meel kasta wuu ku fafay gumeeysiguna weey u cadahay in reer ogaadeenya ay xoriyada ay doo nayaan ka dhab tahay.
laakiin laabtiisa ayaa waxay soo rogila dahay inuu qirto guul darada weeys eimaan halgankana halkisaa haa kasii socdo